Umphakathi waseMpumalanga ushaya amagoli ulwa nodlame olubhekiswe kwabobulili obufanayo | Scrolla Izindaba
Umphakathi waseMpumalanga ushaya amagoli ulwa nodlame olubhekiswe kwabobulili obufanayo
Umphakathi wase-Schoemansdal eMpumalanga uhlangane ngempelasonto ukuzobukisa nokudlala ibhola ukuqwashisa ngodlame olubhekiswe kwabobulili obufanayo.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi owesifazane oneminyaka engama-37 okhubazekile ohlala emphakathini kusolwa ukuthi wadlwengulwa, washiswa ezithweni zakhe zangasese ngumakhelwane ngenyanga edlule.
Isishoshovu esasinda ekudlwengulweni uLydia Sono weLydia Sono Foundation uthe, umcimbi wezemidlalo ubanikeze ithuba lokufundisa intsha ngokulingana nangodlame olubhekiswe kwabobulili obufanayo.
Uthe, ubesebenza ngokubambisana nezinye izinhlangano nekomidi lezemidlalo lentsha lendawo.
Bazungeze umphakathi, bathumela umyalezo kuwo wonke amalungu ngaphambi komdlalo wokuqala.
“Abafana abancane bathole ukuthi, obekwenzeka emphakathini wethu bekungejwayelekile. Akulungile ukudlwengula noma ukuhlukumeza owesifazane noma umuntu othandana naye,” kusho uLydia.
“Kumantombazane, sigcizelela ukubaluleka kokuqeda ukuthula, ngoba baningi abahlukunyeziwe kodwa abakhulumi ngakho.”
ULydia, owadlwengulwa kanye nomlingani wakhe eminyakeni eyisithupha eyedlule ngoba beyizitabane zabesifazane, uthi ukuba yisishoshovu kwakungelula.
Umqhudelwano we-Unity Cup Soccer Tournament, obudlalwa ngabafana namantombazane ukukhuthaza ukulingana phakathi kobulili, unqotshwe yi-Harmony Academy FC.